Mofon’aina – ALATSINAINY 08 JANOARY 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALATSINAINY 08 JANOARY 2018
8 janoary 2018
17 Ary raha tany Mileto Paoly, dia naniraka hankany Efesosy izy ka nampaka ny loholon’ ny fiangonana hankeo aminy.18 Ary nony tonga teo aminy ireo, dia hoy izy taminy: Fantatrareo hatramin’ ny andro voalohany nahatongavako teto Asia izay toetry ny fitondran-tenako taminareo tamin’ izany andro rehetra izany,19 dia ny nanompoako ny Tompo tamin’ ny fanetren-tena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakam-panahy izay nanjo ahy tamin’ ny fanotrehan’ ny Jiosy,20 ka tsy mba nafeniko izay mahasoa, fa nambarako sy nampianariko anareo teo imason’ ny olona ary tao amin’ ny isan-trano;21 ary nambarako tamin’ ny Jiosy sy ny jentilisa koa ny fibebahana amin’ Andriamanitra sy ny finoana an’ i Jesoa Kristy Tompontsika
Asan’ny Apostoly 20.17-21
ASEHOY NY HERY ENTIN’NY TOMPO MIASA
1-Mahaiza mandrindra sy mandamina ny asa
Maika hamonjy an’i Jerosalema ny Apostoly Paoly hitondra ny rakitra sy fanampiana avy amin’ny fiangonana tany Azia . Maika izy satria nikasa hamonjy Pentekosta any Jerosalema (vakio and 16). Tsy afaka nandalo tany Efesosy intsony , araka ny fikasany izy , noho ny fahamehany ka nampiantso ny Loholona , rehefa tonga tao Mileto (and 17). Hain’i Paoly ny nandamina ny asa, arakaraka ny zava-misy. Rehefa nampanantsoiny ny loholona dia tonga tao aminy .Fahaiza-mandrindra sy mandamina izany. Hita koa fa neken-teny i Paoly, noho ny amin’ny Tompo , ary nanana ny fahefan’ny Tompo izy .
Koa mahaiza mandamina sy mandrindra ny asa sy fotoana, fa hahazoana mitaratra ny hery entin’ny Tompo miasa izany. Mampiasa antsika Izy ka manome antsika hery sy fahefana ho enti-mandrindra sy mandamina ny asa isehoan’ny Voninahitr’ Andriamanitra. Asehoy izany eo amin’ny asam-piangonana sy ny asanao andavanandro.
2-Tsarovy fa hery tanterahina amin’ny fahalemena izany
Nananatra ireo loholona , mpiara-miasa taminy tao Efesosy i Paoly , ka nilaza ny fomba entiny mitory Filazantsara sy manompo (and 19-20). Nasehony fa nataony tamin’ny fanetretena sy tamin-dranomaso izany, satria be ny fakampanahy sy ady atrehany. Tsy làlana mora, na tsotra no izoran’ny mino, fa ahitana adin-tsaina amam-panahy, zava-manahirana sy ranomaso. Tamin’izany no nahombiazan’i Paoly, satria afaka nampibebaka ny olona rehetra izy . Tanterahin’ny Tompo amin’ny fahalemena ny heriny.
Moa mivatravatra hatrany tokoa ve ny herin’ny Tompo ?
Mofon'aina - TALATA 09…